गर्धनको कालोपन नहटेर समस्यमा हुनुहुन्छ ? तपाईको किचनमा नै छ यसको समाधान ! – Krazy NepaL
February 10, 2021 765
काठमाडौँ । हामी सबैलाई आफ्नो सौन्दर्य कायम राख्न मन पर्छ। कहिले काही हाम्रो गर्धन वा शरीरका विभिन्न भागमा देखिएको कालोपनाले हामीलाई चिन्तित समेत बनाउछ। खास गरेर गर्धन वा कुईना जस्ता भागमा कालोपना आउने गर्दछ। आज हामीले तपाईको शरीरमा देखिएको कालोपना हटाएर सौन्दर्य फर्काउने विधिन्न उपायका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ।
कागती एउटा कागतीलाई गोलो तरिकाले ५ टुक्रा गरेर काटनुहोस्। त्यसपछि आधा कचौँरा दुध लिनुहोस्। त्यसपछि अघि काटेको कागतीलाई दुधमा डुबाउनुहोस्। त्यसपछि तपाईले बेकिंग सोडा लिनुहोस्। त्यसपछि आधाचम्चा भन्दा कम बेकिंग सोडा उकत दुध र कागतीमा राख्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले त्यसलाई राम्रोसँग पिट्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले उक्त दुधलाई करिब २० मिनेट छोडिदिनुहोस्
Prevकम उमेरमै अत्यन्तै धनि बन्छन् यी राशि भएका व्यक्ति
Nextकेही दिनमै सजिलै तौल घटाउन चाहनुहुन्छ ? यी घरेलु उपाय अपनाउनुहोस्